देशका प्रमुख चार पर्यटकीय गन्तव्यलाई जोड्यो हवाई उडानले, बुद्ध एयरको उडान सुरु - Dainik Online Dainik Online
देशका प्रमुख चार पर्यटकीय गन्तव्यलाई जोड्यो हवाई उडानले, बुद्ध एयरको उडान सुरु
प्रकाशित मिति : ३२ श्रावण २०७८, सोमबार १२ : ०७
देशका प्रमुख चार पर्यटकीय गन्तव्य काठमाडौँ, पोखरा, चितवन र लुम्बिनी हवाई उडानमार्फत जोडिएका छन्। चारै गन्तव्यमा बुद्ध एयरले हवाई सेवा सञ्चालन गरेसँगै यी महत्वपूर्ण गन्तव्य हवाई सेवामार्फत जोडिएका हुन्।
भरतपुर–भैरहवा उडान शुरु भएसँगै चार गन्तव्य जोडिएका हुन्। बुद्ध एयरले आइतबारदेखि भरतपुर–भैरहवा उडान थालेको हो। बुद्ध एयरलाइन्स भरतपुरका प्रबन्धक भक्तबहादुर बस्नेतका अनुसार भरतपुर–काठमाडौँ दैनिक नौ वटा उडान हुँदै आएको छ।
भरतपुर–पोखरा दैनिक एउटा र भरतपुर–भैरहवा हप्ताको तीन उडान भर्न थालिएको छ। आइतबार, बुधबार र शुक्रबार उडान थालिएको उहाँले जानकारी दिए। बस्नेतले भने,“पर्यटकीय गन्तव्यसँगै उपचारका लागि भरतपुर आउन सहज भएको छ।” यससँगै नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार भइरहेकाले यात्रुलाई सहज भएको उनको भनाइ छ।
क्षेत्रीय होटल सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष सुमन घिमिरे भारतीय पर्यटक नेपाल आउन भैरहवा–भरतपुर उडान प्रभावकारी हुने बताउँछन्। देशका चार प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य उडानमार्फत जोडिँदै गर्दा पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
लुम्बिनीमा ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटक आएर त्यहीँबाट भारततर्फ फर्कने गरेको भन्दै उनले ती पर्यटकलाई चितवनसहितका गन्तव्यमा ल्याउन उडान महत्वपूर्ण हुने बताए। सडकको यात्रा गर्नु नपरेपछि छोटो समयमा धेरै ठाउँ घुम्न पाउने घिमिरेले बताउँछन्।
ओलीलाई नेपालको प्रश्न-पिलो निचोरिएर आनन्द भयो भन्नेले किन दिनदिनै संसदमा कराउनु परेको?
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रदेश नं.१ र बागमती प्रदेशमा
बुढीगण्डकी आायोजना बिचौलियाका कारण अलमलमा : बाबुराम
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको
बलिउड अभिनेता सलमान खानलाई रियालिटी सो बिगबोस चलाए बापत् नयाँ सिजनमा ३५० करोड भारु दिइने
दार्चुलालाई केन्द्र बनाएर भूकम्पको धक्का
काठमाडौं । पश्चिम नेपालको दार्चुलामा आज भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ। दार्चुलाको खार्रालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर
प्रेमिकालाई ब्वाइफ्रेन्डको चेतावनीः कोरोना खोप लगायौं भने ब्रेकअप दिन्छु!
कोरोना भाइरसबाट बच्ने एउटै उपाय भनेको कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउनु हो। विश्वभर खोप कार्यक्रम जारी छन्।
१,०९५ कोरोना संक्रमित थपिए, ८ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा १०९५ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। १०
नेकपा एकिकृत समाजवादीले बोलायो केन्द्रीय कमिटी बैठक
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ। बुद्धनगरस्थित क्वालिटी बैंक्वेटमा मंगलबार दिउँसो
केपी ओलीको मुद्दा आज पनि ‘हेर्दाहेर्दै’मा
काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिटको सुनुवाइ
नेप्सेमा ठूलो पहिरोः २७ सयमुनि ओर्लियो बजार, ८ अर्ब बढीको कारोबार
‘फर्नेश आयल’मा देश आत्मनिर्भर बन्न सक्ने, थोत्रा टायरको तस्करीले थप्यो चुनौती
विनियोजन विधेयक पारित, सरकारलाई बजेट खर्च गर्ने बाटो खुला
दशैंका लागि राष्ट्र बैंकले भोलिदेखि नयाँ नोट बाँड्ने